‘जनताको विश्वास र अपेक्षा पूरा गर्न पाउँदा हाम्रो मनोबल उच्च छ’ – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ४ गते ११:३४
नेपाल प्रहरीमा व्यावसायिक गुण भएकामध्ये औंलामा गनिने प्रहरी अधिकारी हुन्- प्रद्युम्न कार्की। व्यावसायिक निष्ठा, निडर, हक्की स्वाभाव, आक्रामक कार्यशैलीले नेपाल प्रहरीमा कार्कीलाई हेर्ने नजरै फरक छ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक कार्की दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभाव नेपालमा छँदैछ। देश तीन सातायता ‘लकडाउन’मा छ। संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। कार्की कार्यरत क्षेत्र तराई खुला सीमा भएको ठाउँ भएका कारण चुनौतीपूर्ण छ। अहिले दुई नम्बर प्रदेश प्रहरीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर हेल्थपोस्ट नेपालका खिलानाथ ढकालले उनीसँग कुराकानी गरेका छन्:
वीरगञ्जमा तीन जना मान्छेमा कोरोना संक्रमण देखिएपछिको अवस्था के छ?
संक्रमित देखिएका तिनै जना जना हाल नारायणी अपताल वीरगञ्जमा उपचारत् छन्। उनीहरूको हालको अवस्था सामान्य रहेको र थप उपचारका साथै स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य भइरहेको छ।
लकडाउन जारी हुनुअघि नै आएका नेपालीमा कोरोना देखिएको हो वा त्यसपछि आएकामा? को हुन् संक्रमित?
वीरगञ्जमा संक्रमित देखिएका तिनै जना भारतीय नागरिक हुन्। उनीहरू सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ मा फागुन ३,४ र ५ गतेसम्म अल्मी इज्तिमाको आयोजनामा भएको मुस्लिम समुदायको सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालका अन्य विभिन्न मस्जिदको भ्रमण गर्दै वीरगञ्ज पुगेका हुन्।
ती माछे कहाँ-कहाँ हुँदै नेपाल आएका थिए? तिनीहरूलाई कसरी हामीले क्वारेटाइन पुर्‍याएका थियौं?
उनीहरू भारतको दिल्लीबाट १७ डिसेम्बरमा रेलको माध्यमद्वारा जोगबनीसम्म आएका थिए। त्यहाँबाट मोरङ, सुनसरी हुँदै २०७६ फागुन ३, ४ र ५ गतेसम्म अल्मी इज्तिमाको आयोजनामा सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ मा भएको मुस्लिम समुदायको सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। त्यसपछि दुई नम्बर प्रदेशमा रहेका विभिन्न मस्जितको भ्रमण गर्दै २० मार्चमा वीरगञ्ज-१ छप्कैयाको यतम खाना दारूल यातमा इस्लामिया मस्जिदमा बस्दै आएका थिए।
उनीहरूलाई वैशाख चैत २६ गते ज्वरो आएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी चैत २७ गते स्वाव परीक्षण गर्न हेटौडा पठाइएको थियो। कोरोना देखिएपछि नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ।
सीमा पारिबाट लुकिछिपी नेपाल आएने क्रम त जारी नै छ नि हैन?
२ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत नेपाल-भारतको सीमाक्षेत्र ४६४ किलोमिटर छ। सो अन्तर्गत ३२९ भन्दा बढी सीमा नाकाहरूबाट मानिसहरू आवतजावत गर्ने सीमा छन्। त्यहाँ बढीभन्दा बढी प्रहरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी नियन्त्रण गर्दै आएका छौं। आवतजावत गर्ने नाकाहरूको प्रयोग नगरी अन्य खुल्ला ठाउँबाट फाट्टफुट्ट प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ। त्यसरी आउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी आठ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ।
भारतबाट आउने मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो संयन्त्र के कसरी परिचालन भएको छ?
सीमा क्षेत्रबाट हुने आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरे मात्र पनि नेपालमा कोरोनाको महामारी फैलने दरमा निकै कमी हुने मेरो ठम्याई हो। सोहीअनुसार हामीले प्रदेशस्थित अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। यस प्रदेशमा कार्यरत् नेपाल प्रहरीको अधिकतम् जनशक्तिलाई सीमा क्षेत्र केन्द्रित गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। लुकिछिपी हुने आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले यस प्रदेश अन्तर्गत सीमा क्षेत्र केन्द्रित गरी नागरिक समाज, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पत्रकार लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सक्रियतामा टोलस्तरमा निगरानी समितिसमेत गठन गरेर प्रहरीले त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गरिरहेको छ।
खुल्ला सीमा छ, सुरक्षा संयन्त्रबीच के-कस्तो सहकार्य छ? कसरी परिचालित छ सुरक्षा निकाय?
खुल्ला सीमा भएको कारण अवैध रूपमा लुकिछिपी हुने मानिसको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरीले आफ्नो सबै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। विशेषगरी, सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलसँग हामीले समन्वय र सहकार्य गरी संयुक्त रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं। साथै, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छौं।
भारतका सुरक्षाकर्मीसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ?
सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन। हामीले प्रदेश र जिल्लास्तरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग सहकार्य गरेका छौं। आवतजावत नियन्त्रणमा सहकार्य छ। भारतमा समेत लकडाउन भइरहेको हुँदा यस कार्यमा भारतीय पक्ष एसएसबीबाट हामीलाई निकै राम्रो सहकार्य प्राप्त भएको छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा कति क्वारेन्टाइन स्थापना भएका छन्? त्यहाँ कति मान्छे छन्? कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के कस्तो समस्या छ?
प्रदेश २ अन्तर्गत आठ वटा जिल्लामा विभिन्न निकायबाट १९८ ठाउँमा ३ हजार ४४१ बेड कक्षमताका क्वारेन्टाइन स्थापना भएका छन्। ती कवारेन्टाइमा ११ सय मानिस छन्। हामीले पनि प्रहरी कर्मचारीका लागि हाम्रा मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा ३७ वटा स्थानमा ६६ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौं।
नेपाल प्रहरीलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल उपलब्ध रहेको स्रोतसाधन अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। सोही विषयलाई ध्यान दिई नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन लागू गरेको छ।
विशेषगरी, २ नम्बर प्रदेशलाई हेर्दा नागरिकहरूमा यस विषयमा चेतना अभाव, अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी जनघनत्व रहेको, भारतमा संक्रमणको दर उच्च रूपमा फैलिरहेको हुँदा लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने समेत भेटिएको छ।
फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी-स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पिपिईलगायत अन्य स्रोतसाधनको कमी, संक्रमितलाई उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल नहुनु, ठूलो संख्यामा टेस्टिङ र स्क्रिनिङ हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गएका नेपालीहरू लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने हुँदा उनीहरूको पहिचान हुन नसक्नु चुनौती छ। नेपाल प्रहरीले आफ्ना सबै संयन्त्रमार्फत रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ।
अहिले फ्रन्टलाइनमा खटिने नेपाल प्रहरी नै छ। सुरक्षाकर्मीलाई के कस्तो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दिएर खटाएकाे छ? के कस्ता समस्या छन्? प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायले कसरी समन्वय गरिरहेका छन्?
प्राय: जुनसुकै परिस्थितिमा नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा नै खटिने गर्छ। तसर्थ, विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९ महामारी हाम्रो पुस्ताको लागि नयाँ संकट छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँगै प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। सो सहयोगबाट मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जाजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू खरिद गरी कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको छ। अनिवार्य प्रयोग गर्न लगाई डिउटीमा परिचालन गरिएको छ।
सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पिपिईलगायत अन्य स्रोतसाधनको अभाव छ। लकडाउनको उल्लंघन, सीमा क्षेत्रबाट लुकिछिपी प्रवेश, संक्रमितको उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल नहुनु, नेपालमा संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन्। यसका लागि तिनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा चुनौतीका विषयलाई समाधान गर्ने गरिएको छ। तिनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा केही मात्रामा सुरक्षाका सामग्री प्राप्त भएका छन्। थप आवश्यक पहल समेत भइरहेको छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको कति जनशक्ति परिचालन गरिएको छ? हामीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीहरू कति उपयोगी छन्?
नेपाल प्रहरीमा न्यून दरबन्दी छ। प्रदेशमा दरबन्दीभन्दा कम जनशक्ति छ। भएको जनशक्तिलाई परिचालन गर्न प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा गरी सोही बमोजिम पिआरटी, आरआरटी टोली गठन गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको आवश्यक सुरक्षा र निगरानीको लागि सुरक्षा टोली खटाइएको छ। अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षामा समेत हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं।
विमानस्थल, राजमार्ग, सीमा क्षेत्र, बजार, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रहरीले हेल्प डेस्क, हेल्थ डेस्क र चेक प्वाइन्टहरू स्थापना गरेको छ। सबै क्षेत्रमा गर्दा ७ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।
यस्तो महामारीका बेला सुरक्षाकर्मीको मनोबल कस्तो छ? महामारीमा काम गर्दा प्रहरीले कस्तो अनुभव संगालिरहेको छ?
नेपाल प्रहरी आफैं यस्तो संगठन हो, जसमा आवद्ध सदस्यले राज्यमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खटिएर कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु भनी संगठनमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। तालिमको क्रममा यस्ता असहज परिस्थितिमा कसरी काम गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइएको हुन्छ। नेपाल प्रहरीले राष्ट्रमा आइपरेका हरेक संकटमा विचलित नभई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीप्रति जनताको जुन विश्वास र अपेक्षा छ, त्यही अपेक्षा पूरा गर्न पाउँदा हाम्रा सदस्यहरू उच्च मनोबल बनाएर खटिरहेका छन्।
तपाईं आफैं महामारीमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ? समग्रमा के कस्तो अनुभव भयो?
मैले धेरै उतार चढावहरू साथै संकटमा समेत सेवा गर्ने मौका पाएको छु। हाम्रो पुस्ताको लागि प्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खालको महामारीको अनुभव थिएन। मेरो लागि भूकम्पपछिको अनुभव यही रह्यो। जुन जिम्मेवारी पाएको छु त्यसलाई मैले सतप्रतिशत निर्वाह गरेको छु।
दुई नम्बर प्रदेशमा कति स्वास्थ्य संस्था छन्? ती पर्याप्त छन्? स्वास्थ्य संस्थाहरूको कामकारबाहीको प्रतिक्रिया के छ?
यहाँ आइसियु भएका २२ वटा अस्पताल छन्। कोरोनाकै लागि उपचार गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन्। भएका अस्पतालमा समेत उपचारको लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, अक्सिजन, थर्मल गनलगायतका उपकरण र औषधी समेत कमी छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पिपिईलगायत सामग्री पर्याप्त छैन। विशेष गरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाले रूघाखोकीदेखि अन्य रोगका बिरामीको उपचार गर्न नमानेको जनगुनासो छ। उक्त समस्यालाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग समन्वय गरिएको छ। अटेर गर्नेलाई कारबाही समेत गरिएको छ।
प्रहरीले २४ सै घन्टा काम गर्नुपर्ने भएकाले अत्यन्तै जोखिम समूहअन्तर्गत पर्ने हुँदा सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी पिपिईलगायत सामग्री खरिद गरिएको छ। प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अपनाइएको छ। शंकित प्रहरी कर्मचारीलाई राख्न प्रहरी कार्यालयमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि व्यवस्था गरिएको छ।